China Wholesale 3 Vislon otomatiki musoro vatengesi nevatengi - GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.
Kumba > Zipper musoro > Zingi chiwanikwa otomatiki musoro > 3 Vislon otomatiki musoro
Iyi 3 Vislon otomatiki musoro otomatiki musoro unogadzirwa neEuropean neAmerican zinc alloy. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu.
1.Chigadzirwa kuunzwa kwe3 Vislon otomatiki musoro
Iyi 3 yerino zino otomatiki musoro wakagadzirwa weEuropean uye American zinc alloy. Iyo kambani yapfuura iyo ISO9001: 2008quality manejimendi system system chitupa. Iyo ine akawanda patents uye allproducts anga ari SGS uye akaedzwa Isai mumusika mushure mekukwanisika, kuunza yakakwana chigadzirwa mhando manejimendi sisitimu, inoramba ichivandudza dzakasiyana-siyana Hardware nesoftware zvivakwa, uye edza kutora pamusika nehunhu.
2. Chigadzirwa Parameter (Magadzirirwo) e3 Vislon otomatiki musoro
Saizi yemukati yemukati: Kukwirira kwemuromo: 2.7MM
Muromo upamhi: 4.8MM
Mucheka musono: 0.95MM
Base musimboti: 1.95mm
3. Product features and application of 3 Vislon otomatiki musoro
4. Product details of 3 Vislon otomatiki musoro
5. Chigadzirwa Kufanirwa kwe3 Vislon otomatiki musoro
6. Kurongedza uye kutakura kwe3 Vislon otomatiki musoro
Hot Tags: 3 Vislon otomatiki musoro, China, Wholesale, Bulk, Vatengesi, Vagadziri